Samsung Galaxy S3 Group SMS ka PC
> Resource > Samsung > Samsung Galaxy S3 Group SMS ka PC
Ma waxaad eryi nuts marka aad leedahay si aad qoraal saaxiibadaa mid mid u soo dirto Farriinta la mid ah? Ha samayn in hadda. Halkan yimaado tababare awood leh Android, Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waa awood aad si ay u sameeyaan qoraalka group on Samsung Galaxy S3 la keyboard ka kombuutarka. Marka aad telefoon ama fariin aad ka jawaabi kartaa adigoo.
Download tababaraha Android inay sameeyaan Samsung Galaxy S3 qoraalka grouply.
Fiiro gaar ah: Dhab ahaantii, ka sokow Samsung Galaxy S3, MobileGo for Android si buuxda u taageersan badan oo telefoonada kale Android. Fiiri liiska qalabka Android taageeray .
Tilmaan fudud ee Samsung Galaxy S3 group qoraalka
Dooro version saxda ah ee tababare tan Android. Waxaa rakib on your socda nidaamka Mac ama PC Windows ka hawlgala. In this article, waxaan diiradda saaraan version Windows ah, in uu yahay, Wondershare MobileGo for Android. Dadka isticmaala Mac, waxaad samayn kartaa qoraalka group on Galaxy S3 la hago la mid ah.
Tallaabada 1. Connect Samsung Galaxy S3 in kombuutarka
Waayo, dadka isticmaala Windows, in aad PC ku xidhi kartaa Samsung Galaxy S3 labada via cable USB ama via WiFi. Haddii aad jeceshahay xiriir WiFi, halkan waxaad ka soo rogan kartaa file MobileGo.apk.
Dadka isticmaala Mac, cable USB ah waxaa laga heli karaa si aad u hesho Samsung Galaxy S3 ku xiran Mac.
Tababaraha Tani Android lagu ogaan doonaa Samsung Galaxy S3 mar. Markaas, xogta ay ka mid yihiin barnaamijyadooda, xiriirada iyo SMS, waxaa lagu soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Fariin group Samsung Galaxy S3
On geedka buugga bidix, u tag "SMS" si ay u muujiyaan suuqa kala SMS ah. Guji "New" inay soo qaadaan suuqa kala Message Send ah. Riix iskutallaabta on dhinaca kore ee midig ee suuqa kala Message Send ah.
Markaas, dhammaan xiriirada aad Samsung Galaxy S3 waxaa lagu muujiyey. Sax off xiriirrada in aad ku socoto qoraal. Markaas, guji "OK".
Hadda, dhammaan xiriirrada la xushay muuqan afargees hore. Markaas, afargees Content ah, qoraal ka kooban in aad rabto in aad soo dirto. Ka dib markii in, guji "Send" in ay u diraan farriimaha qoraalka ah.
Marka aad hesho fariin, MobileGo kuu soo diri doonaa ogeysiis ah ee koonaha midig. Guji "Reply" oo farriin qoraal ah sida a reply.
Marka Tababaraha this Android aad xusuusisaa wicitaan oo taleefan ah, waxaad sidoo kale gacanta karaa ama gacanta ka saaray oo fariin u dirayaa sidii a reply.
Download MobileGo for Android inay sameeyaan fariin Samsung Galaxy S3 ee kooxda.
Saar Music on Samsung Galaxy S3
Sida loo Copy Xiriirada in SIM Card on Device Android
Xiriirada Transfer, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, jadwalka, photos, music, video iyo barnaamijyadooda u dhexeeya iPhone, Android, WinPhone, Nokia (Symbian) telefoonada iyo Blackberry - mid ka mid click!
Faylal ay ka Samsung wareejiyo PC Isticmaalka Kies via WiFi
Samsung VS iPhone: Waa kuwee One Ma jeceshahay wanaagsan?
Sidee inay la midowdo nuqul Xiriirada on Samsung Galaxy S3
3 Hababka in kaabta Samsung Photos iyo Hayso Memory qiimo Fresh
PIN kaabta Samsung: wax aad Device Samsung xirantay
Video qaabab ay taageerayaan Wixii Samsung Galaxy S4, S3 Iyo S2
Sida loo Play WMA on Samsung Galaxy Taxanaha (Galaxy S4, S3, S2, S mid ahaa)
Sidee inay gool u sarifaan Video inay Galaxy S4 ee Tayada Sare
Sida loo Beddelaan AVI in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
Sida loo Beddelaan Video inay Galaxy Note